အမျိုးသမီးပြစ်မှုဆိုင်ရာ Profiles - A - Z ကိုစာရင်း
ရာဇဝတ်မှု & အပြစ်ဒဏ်အပေါ် Profiled အမျိုးသမီးရာဇဝတ်သားများတစ်ခုအက္ခရာစဉ်စာရင်း
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / Mariticide
အင်ဒရူးအာမခံငွေသူမ၏ခင်ပွန်းကိုသတ်ဖြတ်၏ပြစ်မှုထင်ရှားခံရပြီးနောက် Oklahoma တွင်အသေခံတန်းပေါ်သည်။
Susan "Sadie မေလ Glutz" Atkins
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်
Susan "Sadie" Atkins ၏ဟောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ချားလ်စ် Manson မိသားစု။ သူမသည်၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျအကြောင်း, တစ်ဦးက Grand ဂျူရီမတိုင်မီကျိန်ဆို ချာလီ Manson သူမကမင်းသမီး Sharon ကိုတိတ်ဓားဖြင့်ထိုး။
ခွဲခြား: Serial Killer / Parricide / Mariticide
Velma Barfield "Death Row ဂရမ်" ဟုအမည်ပေးထားသည့်ပေမယ့်သူမပွားပေမယ့်ဘာမှခဲ့ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးစွဲ, ပထမဦးဆုံးသူမရဲ့ခိုးဝှက်ဖုံးကွယ်ထားရန်သူတို့ကိုသတ်ပစ်ပြီးတော့, မိသားစုဝင်များထံမှပိုက်ဆံခိုးယူလိမ့်မယ်။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / ပြန်ပေးဆွဲ / ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်
Basso တစ်ဦး 59 နှစ်အရွယ်နှောင့်နှေးလူကိုပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ရက်စက်စွာသည်သူ၏အသေခံခြင်းရရှိလာတဲ့အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုနှငျ့အတူသူ့ကိုရိုက်တယ်။
Kenisha Berry ဟာ
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / ကလေး
နိုဝင်ဘာလ 29, 1998 တွင်, Berry ဟာသူမရဲ့4နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုကောင်လေး၏နှုတ်တော်ထွက်ကိုဖြတ်ပြီးပြွန်တိပ်သွင်းထားမယ့်ပလပ်စတစ်အိတ်သို့ကိုယျတျောကိုတင်နှင့်တစ်ဦး dumpster ၌သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထားခဲ့တယ်။ သူကအသေသတ်ခြင်းကိုကျဉ်းကျပ်။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / ပြန်ပေးဆွဲ
Carty တစ်ဦးသုံးရက်ကြာအရွယ်ကလေးသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် hogtied သူမ၏ဦးခေါင်းကိုကျော်တစ်အိတ် taped နှင့်သူမ၏ကျဉ်းကျပ်။
Lynette အဲလစ် "Squeaky" Fromme
Lynette "Squeaky" Fromme သူထောင်ထဲကိုစလှေတျခံခဲ့ရသညျ့အခါအစွန်းရောက်ခေါင်းဆောင်ချာလီ Manson ၏စကားသံဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမလည်းတစ်ဦးသေနတ်ထောက်ပြ နိုင်ငံတော်သမ္မတ Ford ကား သူမကယခုဘဝဝါကျ်ထမ်းဆောင်သောအဘို့။
Cathy လင်း Henderson
Henderson သူမက babysitting ခဲ့သည်3လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုကောင်လေး၏ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်လူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / လုယက်မှု / ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း
Holberg တစ်ဦးရိုက်နှက်သောသံတူသည်နှငျ့အတူသူ့ကိုသပိတ်မှောက်ခြင်းနှင့်သူ့ကို 60 နီးပါးကြိမ် stabbing တစ်ဦး 80 နှစ်အရွယ်လူကိုလုယက်ခြင်းနှင့်အသတ်ခံ။
ခွဲခြား: Serial Killer / မုဒိမ်း / ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း / Fratricide
Karla Homolka , ကနေဒါရဲ့အများဆုံးကြောက်မက်ဖွယ်အမျိုးသမီးယုံကြည်စိတ်ချမှု၏တဦးတည်း, နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်အကြာငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ, မူးယစ်ဆေးအတွက်သူမ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် 12-တစ်နှစ်ဝါကျအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မုဒိမ်းကျင့်, နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်သတ်ဖြတ်ပြီးနောက်အကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / Parricide
သူသည်မိသားစုရဲ့စိန့်ဂျွန်, မစ်ဆူရီ, အိမ်မှာအိပ်ပျော်လျက်အဖြစ်ဇူလိုင်လ 4, 1990 တွင်, Stacey အမ်း Lannert, အသက် 18, သူမ၏ဖခင်, တွမ် Lannert, ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ရဲမှသူမ၏ကြေညာချက်မှာတော့ Stacey သူမ၏ဖခင်လိင်သူမ၏စော်ကားခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ သူမသည်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပြီးထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံရခဲ့သည်။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / Prolicide / ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်
Angela McAnulty ဟာနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း, သူမ၏ 14 နှစ်အရွယ်သမီး၏လူသတ်မှုမှအပြစ်ရှိကြောင်း။
ဆက်မက်ကာသီထပ်တလဲလဲသူမ၏သေခြင်း၌ရရှိလာတဲ့ 70 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဓားဖြင့်ထိုး။
blanche Moore က
ခွဲခြား: Serial Killer
Moore ကအာဆင်းနစ်နှင့်အတူသူမ၏အသက်တာ၌ယောက်ျားအဆိပ်သင့်စေတဲ့မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ရည်းစားသတ်ဖြတ်သည်သေခြင်းအတန်းအပေါ်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
Frances Elaine နယူတန်
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / Familicide
နယူတန်သေနတ်နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းသူမ၏ခုနစ်ခုနှစ်အရွယ်သားနဲ့အာမခံငွေသူမ၏ 21 လအရွယ်သမီးကိုသတ်ကြ၏။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / သန္ဓေသား Theft
Darcie ပီယပ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသူမ၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေလိမ်ညာ။ သူကသူမ၏သူမ၏ဟန်ဆောင်ကလေးရှိသည်ဖို့အတှကျအခြိနျရောကျသောအခါသူမကကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမအသတ်ခံနှင့်သူမ၏မွေးသေးသောကလေးသူငယ်ကိုယူ။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / Prolicide
Darlie Routier သူမ၏သားသမီးများ၏လူသတ်မှုများအတွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်အသေခံတန်းပေါ်မှာထိုင်။ အတော်များများကမေးခွန်းများကိုသူမ၏စမ်းသပ်မှုနောက်ပိုင်းတက်လာကြပြီ။ သူမပြောသလိုပဲခဲ့သလဲ သင်ဆုံးဖြတ်။
Felecia ဖြစ်သူ Scott
Felecia ဖြစ်သူ Scott သူမ၏သစ်ကိုရည်းစားနဲ့ကလေးရှိခြင်းဆက်ဆံရေးတံဆိပ်ခတ်ထားကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်သော်လည်း, သူမကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူး။ သူမရဲ့ဖြေရှင်းချက်? ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမသတ်နှင့်သူမ၏ကလေးခိုးယူ။
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / လုယက်မှု
Sheppard သူမ၏သားကောင်ရဲ့ကားကိုငျြတယျ, ဒါကြောင့်သူမတစ်ဦးဓါးနှင့်အတူငါးကြိမ်သူမ၏လည်ချောင်းလျှော့ချကာရုပ်ထုနှင့်အတူသူမ၏ရိုက်တယ်။
Christina အက်စ် Walters
ခွဲခြား: လူသတ်မှု / ဂန် Related
တစ်ဂိုဏ်း-စတင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Walters ကကျပန်းသုံးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များကိုရှေးခယျြသူတို့ကိုပစ်သတ်။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်တို့သေဆုံး, တဦးတည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ခွဲခြား: H ကို omicide / Prolicide
တစ်ဦးက၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို Andrea Yates , သူမ၏အသက်, rusty Yates မှသူမ၏အိမ်ထောင်ရေး, နှင့်သူမ၏သားသမီးငါးယောက်ရေနစ်သေကုန်ပြီသူမ၏အထိဦးဆောင်သောကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ။
ဂျိုဒီ Aria ၏ပရိုဖိုင်းနဲ့ Travis အလက်ဇန္ဒား၏လူသတ်မှု
Cheyanne Jessie - အေး-အသွေးအားလူသတ်မှု
ဖလော်ရီဒါရဲ Killer Times ကမူးယစ်ဆေးကူးသန်းရောင်းများနှင့်လူသတ်မှုရစေသော 68 Shot
အဲလက်စ်နှင့် Derek ရှငျဘုရ: Kill အဘယ်သူသည်ကလေးများ
စိတ် Killers အကြောင်းထိပ်တန်း 10 စစ်မှန်သောရာဇဝတ်မှုစာအုပ်များ
ကလဲ့စားအဘို့သူ၏သမီးသေဆုံးသူကားအဘယ်သူယောဟနျသ Battaglia ၏ပုံပြင်
တစ်ဦး Commentary ဆိုတာဘာလဲ
အဘတို့အဘို့ 10 ဂန္ထဝင်ကဗျာများ
ကမ့်ဘဲလ်တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
မူလစာမျက်နှာမှာ penicillin Make လုပ်နည်း
မြို့တှငျနထေိုငျ? သငျသညျဆဲ Stargaze နိုင်သလား
တက္ကသိုလ် Louisville က၏အဆင့်လက်ခံရေး
အင်္ဂလိပ်ဘုံအမှား - သူတို့ကအဲဒီမှာသူတို့ vs. vs. နေ
Lab ကပစ္စည်းကိရိယာ & တူရိယာ
တစ်ဦး Seance ကိုင်ထားရန်ကဘယ်လို
ဓာတုဗေဒအတွက် Ester အဓိပ္ပာယ်
အဆိုပါပဉ္စမအိမ် - နက္ခတ်ဗေဒင်အိမ်များ
အကြှနျုပျ၏အိမ်သရဲခြောက်သော Is အကယ်. ငါသည်အဘယ်သို့သင့်သလဲ